Ny fizotra na ny fizotry ny fotoana dia iray amin'ireo singa fanampiny azontsika atao ampidirina anaty tranokala hanehoana ny fivoarana na ny fivoarana an-taonan'ny orinasa na orinasa iray. Ny fanehoana sary tsara maso izay mahafantatra ny fomba hanoratra azy tsara amin'ny haitao sy ny singa hita maso, dia afaka mampiseho ireo dingana noraisin'ny serivisy na vokatra iray rehefa mandeha ny fotoana.
Ireto misy fandaharam-potoana 29 izay ho hitanao etsy ambany avy amin'ny tsipika mitsangana tahaka ny faravodilanitra. Hahita ny tsara indrindra mifanentana amin'ny zavatra ilainao ianao amin'ny toerana misy azy ao amin'ny pejy iray amin'ny tranonkala izay novolavolain'ny mpanjifa na ho anao. Handeha amina fanangonana fandaharam-potoana mahaliana tena mahafinaritra izahay.
1 Fotoam-potoana amin'ny alàlan'ny fanodinana
2 Fotoam-potoana amin'ny CSS
3 Slider amin'ny fizotry ny fotoana mahaliana
4 Fandaharam-potoana mandroso
5 Fotoam-potoana miaraka amina lohateny sy Flexbox voafetra
6 Tetikasa fandaharana
9 Tondro ara-potoana mitsangana
10 Fotoam-potoana ao amin'ny Flexbox
11 Fotoam-potoana ao amin'ny DIV
12 Fotoam-potoana amin'ny CSS sy HTML
13 Tondro ara-potoana sy hevitra momba ny hevitra
14 Fotoana maraina amin'ny HTML sy CSS
15 UI timeline
16 Ny fe-potoana amin'ny CSS ihany
17 Tabilao valiny V3
18 Tabilao miloko miloko
19 Tondro ara-tantara mamaly
20 Fandaharam-potoana ho an'ny vondrona
21 CSS marindrano sy ny fizotry HTML
22 CSS timeline, HTML ary slick.js
23 Fandaharam-potoana V1
24 CSS CSS ara-potoana marindrana
26 Tondro marindrano
27 Fotoana tsy voalaza anarana
29 Tabilao marindrano hafa
Fotoam-potoana amin'ny alàlan'ny fanodinana
Fotoam-potoana amin'ny CSS
Ity timeline ity dia mampiasa kaody CSS mba ho azo alamina tsara amin'ny sasany amin'ireo fananany. Tsy manana scrolling izy io toy ny teo aloha, fa mampiavaka azy ny boaty andiany sy ny loko manga hanome azy io hikasika tena kanto ary hanampy amin'ny lisitry ny fizotran'ity famoahana ity.
Slider amin'ny fizotry ny fotoana mahaliana
Fotoam-potoana miaraka amina lohateny sy Flexbox voafetra
Kaody HTML sy CSS ho an'ny lohateny raikitra izay hijanona ho raikitra io amin'ny fotoana anaovanay ny diantsika ao amin'ny pejy. Fahalalana lehibe ho lasa fandaharam-potoana mahaliana ho an'ny mpamorona ankehitriny izay te hisongadina amin'ny fenitry ny famolavolana tranonkala ankehitriny.
Ity fandaharam-potoana ity dia mampiasa CSS sy HTML hanolotra fandaharam-potoana manan-danja hampiasana io fe-potoana manokana io ho an'ny tetikasa. Rehefa manodina azy isika dia mandalo ny andro amin'ny herinandro, noho izany dia lavorary ny fampiharana azy io ho an'ny fitaovana fiaraha-miasa namboarin'ilay orinasa mihitsy.
Hyperloopu dia fandaharam-potoana izay miavaka noho ny famolavolana ampiasaina ary noho ny fandaharana tsy misy afa-tsy amin'ny HTML sy CSS. Izy io dia miavaka amin'ny alàlan'ny fampiasana habe samihafa amin'ny endritsoratra amin'ny tsipika misy tsipika mitsivalana sy andiana boaty izay manamarika ny fotoana manan-danja tsirairay amin'ny fizotry ny fotoana.
Tondro ara-potoana mitsangana
Fisaorana elanelam-potoana izay manalavitra ny tenany amin'ny ambiny amin'ny alàlan'ny fikasohany amin'ny fahitana. Izy io dia manana ambaratonga gradient tena matanjaka amin'ny famolavolana sy boaty andian-dahatsoratra izay manamarika ny elanelam-potoana ireo. Voalamina amin'ny CSS sy HTML.
Fotoam-potoana ao amin'ny Flexbox
Iray amin'ireo fandaharam-potoana vita tsara indrindra sy izany dia mifototra amin'ny karatra mba hampidirina ny fampahalalana rehetra ilaintsika mandritra ny elanelam-potoana. Ary novolavolaina tamin'ny HTML sy CSS, dia tsy maintsy raisina ihany koa fa ny karatra rehetra dia tokony hanana ny haavony sy ny sakany mitovy mba hanisana ny habaka ho an'ny efijery lehibe kokoa.
Fotoam-potoana ao amin'ny DIV
Tabilao farafahakeliny amin'ny famolavolana ary efa izany tamin'ny HTML sy CSS ihany no novolavola, noho izany ny fampiharana azy dia mety ho haingana be. Izy io dia mety tsara amin'ny famoahana tabilao amin'ny fampahalalam-baovao noho ny famaranana monochrome.
Fotoam-potoana amin'ny CSS sy HTML
Afaka mametraka ianao 400 × 300 sary habe amin'ity tsipika fizarana manavaka ny loko maitso an'ny tsipika ity sy ny lahatsoratra amin'ny daty sy andro. Tsy misy sary mihetsika ary mampiavaka azy amin'ny endriny tsotra amin'ny ambaratonga rehetra.
Tondro ara-potoana sy hevitra momba ny hevitra
Tabilao iray tsy mitovy amin'ny an'ny hafa raha mamela asio karatra misy sarin'ireo mpampiasa, na farafaharatsiny izany no fikasana amin'ny voalohany. Miaraka amin'ny fomba fahitana tena tsara, ireo karatra dia mampiasa alokaloka ho an'ny fandaharam-potoana somary fisaka tsy misy sary mihetsika.
Fotoana maraina amin'ny HTML sy CSS
Tabilao tonga lafatra hamaliana izany mampiavaka azy ny maha HTML, CSS ary manolora fandaharam-potoana somary tsotra nefa tena finday.
Ity kaody amin'ny HTML sy CSS ity dia mety tsara ho an'ny asehoy ny andro fiasana amin'ny fampiofanana. Izy io dia mamaly amin'ny sary lohateny sy andiana bokotra izay mampiseho azy amin'ny fomba mazava sy madio amin'ny lafiny visual.
Ny fe-potoana amin'ny CSS ihany
Ity fizaram-potoana ity dia miavaka amin'ny maha-ao amin'ny CSS sy a andian-doko voafantina tsara: mena sy maitso. Maitso handrakofana tanteraka ny pejy iray manontolo, fotsy ho an'ny lahatsoratra sy fizarana fizarana ary mena hanavahana ny elanelam-potoana misy antsika. Azontsika atao ny manindry ny elanelam-potoana tsirairay hametrahana azy amin'ny boaty manodidina azy ary manasongadina azy.
Tabilao valiny V3
Tabilao miloko miloko
Tondro ara-tantara mamaly
Fandaharam-potoana ho an'ny vondrona
CSS marindrano sy ny fizotry HTML
Namboariny fantatra Envato Tuts +, atolotra antsika ny fizotry ny marindrano miaraka amina kara-panadio madio sy fototra amin'ny endriny. Loko fisaka sy tsipika marindrano misy teboka mena maromaro izay mifangaro isaky ny elanelam-potoana.
CSS timeline, HTML ary slick.js
Pastel feo amin'ny famolavolana ho an'ny fizotry ny fotoana izay misongadina amin'ny fampisehoana ny sary tsirairay mampiseho isaky ny elanelam-potoana. Ny tetezamita eo anelanelan'ny sary sy ny elanelam-potoana no mampiavaka an'io fandaharam-potoana io.
Tondrozotra iray miavaka amin'izany bokotra isaky ny tsipika mitsangana isaky ny elanelam-potoana hampifandraisana sary ambadika iray feno isaky ny manindry iray isika.
CSS CSS ara-potoana marindrana
Tsy ho afaka tsindry ianao na aiza na aiza amin'ity timeline ity izay nasongadin'i a endrika tsara indrindra amin'ny alàlan'ny safidy hendry amin'ny palette miloko ary andiana sandwiches isaky ny fandaharam-potoana. Tsy misy ny sarimiaina, fa amin'ny maso dia mahafinaritra ny maso izany.
Fotoana tsy voalaza anarana
Ny fizotry mainty tokana avy amin'ny lisitra ambany. Avy eo izy mampiasa loko isan-karazany mba hanavahana isan-taona sy ny lahatsoratra miaraka amin'ny fetrany. Izy io dia manana sary mihetsika miavaka handalo eo anelanelan'ny lahatsoratra tsirairay.
Mametraka ity fandaharam-potoana ity ny lantom-peony amin'ny loko maitso ho static tanteraka.
Tabilao marindrano hafa
Azo atao izany apetraho eo akaikin'ny efijery feno ny sary ho an'ny fandaharam-potoana izay miavaka amin'ny fampiasana manga sy volondavenona, miampy andiana boribory izay maneho isan-taona.
Aza adino andian-dahatsoratra hafa amin'ny CSS sy HTML.
Tetikasa sary an-tsitrapo ho an'ny fandriam-pahalemana fitaovam-piadiana efa misotro ronono